Heveriko fa: Debian 7 dia nanampy an'i Gnome Shell | Avy amin'ny Linux
satanAG | | Fisehoana / personalization, Fitsinjarana, GNU / Linux
Noho ny antony miasa volana maro lasa izay dia tsy maintsy nampiasaiko aho Debian (izay tiako foana, fa nampiasa OpenSuse aho) ary nanana fotoana malalaka aho ary nanapa-kevitra ny hametraka azy io amin'ny Gnome. Mazava ho azy fa nitsikera izany foana aho Akorandriaka gnome, Unity, kanelina sy izay ady hevitra rehetra manodidina GNOME toy izany.
Ny notsikeraiko mafy momba ny Gnome dia ny endriny foana, tsy nisalasala aho fa rehefa nivoatra ny kinininy dia hanatsara ny fitoniana sy ny fahombiazany, ho ahy izay tsy nisy resaka intsony. Ka ny sisa tavela dia io karazana "tablop" io izay tsy tiako satria noheveriko fa dingana lehibe avy amin'ny fomba fiheverantsika ny birao nentim-paharazana, ary satria, tsoriko, fa be ny lesoka avy amin'ny ekipa Gnome.
Ny fahatsapako aorian'ny volana maromaro nampiasako an'i Debian niaraka tamin'i Gnome dia ny fifangaroana tena tsara tokoa, farafaharatsiny ao amin'ny solosainako, tsy azo resena ny zavatra niainana, Mazava ho azy, misy zavatra maro hanohizana ny asany ao amin'ny sehatry ny fampisehoana izay azo antoka fa nihatsara niaraka tamin'ireo kinova vaovao.
Fa maninona aho no milaza fa nanampy an'i Gnome Shell i Debian 7? Satria mino ny zava-misy aho Akorandriaka gnome Ny fahatongavana amin'ny kinova Debian dia manome antsika fahatokisan-tena fa hilamina ny zava-drehetra, na izany aza, izany dia vokatry ny hadalàn'ny fitsinjarana izay aleony ny fitoniana noho ny zava-baovao.
Ny zavatra iray hafa tsikaritro dia ny hoe, Debian 7 dia famotsorana nahomby, handeha hiteny mihitsy aza aho hoe, no famoahana tsara indrindra amin'ny taonaRaha ny fanazarana ireo fizarana hafa, saingy tamin'ity fotoana ity dia tsara toetra i Gnome Shell ary noho ny zava-bita dia nankany amin'ny kongresy Free Software aho ary nitovy ny tsikera nataon'ireo rehetra nampiasa an'i Debian + Gnome: «Tsara , novela, matanjaka, mahay ... sns ”sy ny mpamaritra hafa toa an'io natiora io no re tao. Nahazo aina aho satria fantatro fa tsy ho irery aho.
Heveriko fa ny asan'ny ekipa Debian dia tena tsara ka nanampy an'i Gnome izany mba tsy hatahoran'ny olona farafaharatsiny, ary na dia izany aza, ka misy olona manova ny heviny momba ny tontolo iainana.
Tsy haiko, ny solosaina tsirairay dia izao tontolo izao, tsy mody lazaiko hoe izy no tsara indrindra satria havany izany, saingy tsy maintsy lazaiko fa i Debian + Gnome dia gaga be noho ny tsara kokoa, ka maro amintsika izay nisalasala ny amin'ny mety ho Gnome Shell dia tsy maintsy nieritreritra indroa izahay vao naneho hevitra indray. Amin'izay rehetra ambarako izay dia marihina fa ny fahakingan'ny distro dia nahatonga azy hanana fiainana tsara sy milamina ary ambonin'izany rehetra mifanaraka amin'ireo fotoana ireo.
Mitovy ny hevitrao? Sa raha tsy izany? Arahabaina….
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Heveriko fa: Debian 7 dia nanampy an'i Gnome Shell
Azo antoka fa ilay tokana niditra tao amin'ny 3.4 fa tsy ilay 3.6, izay mbola milamina kokoa aza, fa he, amin'ny farany ny gnome dia hahazo indray ny quota very.
Tsy ianao irery, omaly aho nametraka Antergos (ilay Cinnarch taloha) niaraka tamin'ny akorandriaka Gnome ary tiako be izany ka hiala amin'ny Kde nijanona. Tena be ranoka izy io, ny fanesorana ireo dingana sasany dia manomboka amin'ny 320 mb (mitovy amin'ny Kde), tiako ny fanamorana ny fampiasana azy, lasa zatra haingana be ianao ary milamina tsara indrindra. Raha hametraka saingy angamba ny tsy fisian'ny fanaingoana azy, fa ny antsasany dia raikitra amin'ny fanitarana Gnome.
Etsy andanin'izany, Antergos dia mirentirenty, tsy olana iray akory. Ilaina ny manandrana.
Nampiasa akorandriaka Debian + Gnome aho hatramin'ny nidirany tao amin'ny sampana fitiliana ary nilamina tsara ny zava-drehetra, na dia nandritra ny fotoana fohy aza dia nifindra tany amin'ny akorany Ubuntu + Gnome aho satria te hanandrana Steam, ary ny mpamily AMD tompony dia tsy niara-niasa taminy. Mpizara X izay nampiasa an'i Debian, mandra-pivoahan'ny andiany 13 an'ny mpamily, avy eo niverina tany amin'i Debian aho ary tonga lafatra ny zava-drehetra.
efa zatra an'io ry zareo.
Eny, alaim-panahy hiverina amin'ny andro taloha aho, izany hoe, Debian, satria resin'ny Gnome shell aho fa ny 3.8 izay ananako dieny izao ao amin'ny Arch dia tsy mandeha amiko tsara, misy lesoka tsy zaka
Inona no sary sy fikirakira anananao? 🙂
tsy misy zavatra mahafinaritra, fa hatreto dia niasa tsara be tamiko izy io
Mhh namaky olana maro tamin'ny forum aho tamin'ny alalàn'ny intel sy gnome 3.8: /
Hitanareo, novaina ihany koa io maraina io ho 3.8.2 ary nanantena aho fa efa namboarin'izy ireo izany, saingy mbola nitovy hatrany izany ... Mieritreritra aho fa miandry ahy i Debian.
Izay .. mamihina an'i Debian 😀
Fantatro ihany koa ireo olona nanana olana maro tamin'ny tetezamita, saingy satria nametraka andohalambo tamin'ny 0 aho dia milamina ny zava-drehetra ...
Tsy fahita firy. Ny kahie misy ahy dia misy karatra Intel tafiditra ary miasa tsara ny GNOME, tsy misy olana mifandraika amin'ny DE. Btw, koa Arch.
Toy ny zava-drehetra izany! TSY misy zavatra mandeha ratsy ho an'ny rehetra, ny bibikely tsy mahatratra 100% n'ny mpampiasa velively, ohatra. Raha mampiasa sary Intel aho dia tsy afaka manamboatra distro misy kernel avo kokoa noho ny 3.8, ary ny ankamaroan'izy ireo dia tsy ... .
angamba noho ny olan'ny ondrilahy no manantona
Tsy maintsy jerenao ihany koa ny habetsaky ny ondrilahy ananany, satria ny sary mihetsika dia maka ilay ram avy amin'ny pc ary ny gnome3 irery dia mandany 400 MB.
Mety ho ny fampiasana ny tavoahangy celeron dia namboarina niaraka tamin'ilay sary ary izany no mahatonga anao hianjera, aza adino fa ny gnome3 dia mitaky fanafainganana 3D ho an'ny shell-gnome
rolo, saingy tsy mety izany, satria Gnome 3.8 no nitranga tamiko, na tamin'ny KDE, na tamin'ny LXDE niaraka tamin'ny compiz na zavatra hafa. Mba hahafahako miditra ao amin'ny Gnome dia mila manova ny fomba hafainganana avy amin'ny UXA mankany amin'ny SNA aho. Ka heveriko fa olana amin'ny intel
mety marina ny itachi ary bibikely gnome izay mandositra ny OS ampiasaina
Ny marina dia gaga aho fa tsy mahomby amin'ny Intel, mpamily maimaimpoana, indraindray toa izao no nivadika izao tontolo izao, fa ny nvidia dia tsara kokoa noho ny intel ... raha fintinina dia zavatra hafahafa no hita
Hofihiniko mafana i Debian xDD
GNU / Mate dia hoy izy:
Itachi, raha mbola tsy nomena anao i Debian, andramo ity aloha,
Zatra mametaka azy io isaky ny manana olana aorian'ny fanavaozana Gnome.
Oh, ary raha mitohy ny olana dia azo atao ihany koa ny mampiasa lohahevitra "olana", izay tsy dia fahita loatra rehefa manavao endrika vaovao amin'ity tontolon'ny birao ity ianao. Raha izany dia soraty amin'ny terminal,
gsettings mamerina org.gnome.desktop.interface gtk-theme
Manantena aho fa manampy ity 🙂
Valiny amin'ny GNU / Mate
Ny baiko faharoa amin'ny maha mpampiasa azy, mazava ho azy. Aza mieritreritra azy ho faka, na amin'ny sudo 😛
misaotra tamin'ny fahaliananao fa nametraka an'i Debian ihany aho tamin'ny farany. Miasa lavorary ny zava-drehetra; tsy misy olana, na dia milaza ny marina aza aho dia tena malahelo an'i Arch¡¡¡¡¡¡ xDD
Salama daholo ato amin'ity forum ity.
Mahagaga i Debian, miaraka amin'ny XFCE4 nohavaozina faran'izay kely, mitahiry ny CUPS, SAMBA, sns ... 150 MB fotsiny no laniny amin'ny 64 bits, na kely noho ny Arch ...
Tena nahavita asa tsara tokoa izy ireo tamin'ny Debian 7.
Amin'izao fotoana izao dia efa ananako tamin'ny fitsapana izany ary handeha tsara.
debian wheezy miaraka amin'ny fanjifana Mate 105 MB amin'ny 64bits
Eny, miankina amin'ny fanatsarana sy serivisy amin'ny fanombohana izany.
Ireo 105 MB dia misy CUPS, SAMBA, sns…?
AleQwerty dia midika hoe fametrahana feno vao vita. ary ny fanjifana rehefa manodina ny pc ny olona ary tsy manokatra na inona na inona afa-tsy ny rafitra fanaraha-maso.
Mazava ho azy, miaraka amin'ny fotoana sy fametrahana programa sns, azo ampiasaina bebe kokoa ny MB vitsivitsy, saingy toy izany koa no mitranga amin'ny gnome3 na amin'ny birao rehetra
ny tiako hambara dia ny maha samy hafa ny fihinanana satria zava-dehibe ny nijanonantsika nanomboka ny 105 MB ka hatramin'ny 400 an'ny Gnome3 ary ilay Mate, izay fork an'ny Gnome2, dia birao feno kokoa noho ny LXDE sy XFCE
Miaraka amin'ny olan'ny fanavaozana dia ny famahana olana, ao amin'ny debian stable koa misy programa izay havaozina matetika kokoa noho ny hafa
OK, ka tsy ampidirin'izy ireo ny CUP na ny SAMBA. Na izany aza, ny sasany amin'ny MATE dia tsy tian'ny mpamorona Debian satria tsy manome fanampiana ofisialy an'io tontolo iainana io. Notsapaiko be dia be tao amin'ny Mint aho ary tena mandeha tsara.
Nasehon'izy ireo tao amin'ilay wiki matevina ihany koa ny antony tsy nanampian'i Debian izany ao amin'ny toerana anaovany izany:
Soa ihany nanomboka tamin'izay, Mate dia nivoatra tsara, nanampy tsikelikely ny fanohanan'ny GTK3, tsy nanadino ny kaody be loatra ary nijanona tsikelikely ny fitazonana ireo tranomboky efa lany andro, noho izany antony izany dia ilaina ny fampiasana azy.
PS: Wheezy miaraka amin'i Mate aorian'ny namboariny tanteraka dia mandany ahy 130 mb rehefa miditra (na dia tsy mampiasa samba aza) ary ny Gnome 2 ao amin'ny Squeeze dia mandany ahy 120.
Manantena aho fa ny fampisehoana amin'ny PC lany andro dia mitovy na tsara kokoa noho ny GNOME teo aloha (Debian Squeeze no ampiasaiko ankehitriny).
Na izany na tsy izany, mivavaka fotsiny aho fa ny GNOME Fallback dia hitovy tanteraka amin'ny GNOME 2.
ho an'izay mametraka tsara kokoa an'i Mate izay fork an'ny gnome2
Mampalahelo fa manana vanim-potoana fanavaozana matetika kokoa noho ny taloha Debian Stable, noho izany dia hifidy XFCE aho noho ny fahatsorany manetry tena.
misy zavatra tsara kokoa noho ny vady 😉 consort desktop an'ny SoluOS raha ny marina ary ao amin'ny aur repo ihany koa io; D
Debian 7 + Gnome dia mandeha tsara. Asa tsara. Mampiasa openSuse 12.3 miaraka amin'ny Gnome ihany koa aho ary tsy misy olana. Na eo aza ny tsikera ataon'ny maro momba ny Gnome 3, tsy azo lavina ny fahatsorana sy ny hafainganana anananao nahazatra azy ary hitantana azy isan'andro.
Mamaly an'i Konzentrix
"Mahafinaritra, tantara, matanjaka, tsiranoka .. sns"
Tsara sy manavao amin'ny fehezanteny tokana ao am-bavan'ny debian?
Tamin'ny alarobia dia tokony ho hitako izany !!!
Eny Debian Stable dia toy izao foana. Fahagagana izany raha nitovy ny filazan'izy ireo momba ny Debian Testing na tsy marin-toerana.
Mazava ho azy fa ilay olona nilaza tamiko fa manondro ny fiovana goavana eo amin'ny Debian 6 sy Debian 7. Tsy ny "fanavaozana" ireo fonosana.
Mampalahelo fa tsy afaka mampiasa azy io aho satria tsy haiko ny mametraka ny modely ho an'ny tabilao Broadcom WiFI, ambonin'izany dia tsy manana tariby ethernet aho: /, dia ho hitako raha afaka manangona iray aho 😛
Ao amin'ny Gnome, tontolo iainana tsara izy, tiako be izany, na dia nanana traikefa ratsy niaraka taminay tao amin'ny Fedora 16 sy 17 aza aho, saingy mahazo aina sy mahafinaritra be ny fahitana.
Raha tsy misy ny mpamily wifi amin'ny Linux, dia misy mandritra ny fotoana ela ny ndiswrapper hampiasana azy ireo fonosana ahafahana mampiasa ny mpamily ho an'ny fitaovana MS WOS ho an'ny Wi-Fi tsy misy mpamily teratany.
Manaiky aho fa mahavariana ny debian stable, raha ny momba ny gnome 3 dia toa maimbo an'ny injeniera mafy loha, avelao aho hanazava: mety ho faly kokoa ireo mpampiasa raha voatahiry ny fahafaha-manaon'ny gnome2, ary karazana fifanarahana mihemotra, izay Tsy nanana olana tamin'ny ATI i Mutter ary azo soloina - amin'ny fanananao azy ireo - toy ny amin'ny Gnome2 azonao atao ny misafidy ary manana ny fahafaha-manatsara ny endrika sy ny fiasan'ny Gnome2. Toy izao no nivoahan'ny forks toy ny Mate, Cinnamon ary Consort, izay tsy hamela izany fahafaha-miovaova ho an'ny mpampiasa izany, miaraka amin'ny asa kely dia kely avy amin'izy ireo ary mieritreritra ireo mpampiasa fa tsy hoe "hanapaka ny tadiny" izy ireo, tsy mahagaga izany namoaka ny Unity i Ubuntu, na maro amintsika no nifindra monina tany XFCE na KDE taorian'ny fahatongavan'i Gnome3 sy Unity.
Kyle izao - ny KDE napetraka farafahakeliny, ary ny Unity vaovao ho an'ny mpizara sary ubuntu MIR vaovao dia toa mandeha tsara.
Gnome3 dia nanararaotra ny sehatry ny Gnome2 ary nanolotra izany tamin'ny hafa - ho an'ny tsara indrindra inoako ny fiaraha-miasa - XFCE Heveriko fa tamin'ny farany dia izy no tena nahazo tombony betsaka indrindra, na dia tsy fantatro aza raha misy statistika, i Manjaro - izao no distro mandeha rà Ny toerana tena tian'i Edge manolo an'i Sabayon - ataovy toy ny biraonao default - manohana ny rehetra - dia famantarana tsara ny tanjaka azon'ity birao ity izay manohitra ny gnome2 izay tsy dia nisy zavatra hatao.
Hitako bebe kokoa hatrany ny ho avy eo am-pelatanan'ny Ubuntu, ny miriny ary ny firaisan-kinany, ambonin'ny ambonin'ny Gnome3, amin'ny resaka mpampiasa, ary ho an'ireo mpampiasa mandroso, XFCE Kyle - KDE farafahakeliny - Consort - Gnome2 miaraka amin'ireo tranomboky gnome3 - ary ny mitovy aminy izay mivoaka satria tianay ny manana birao izay tsy dia mampiasa loharanom-bola firy ary mamela antsika hanao "ny zava-drehetra".
Te-hiteny amin'i Wayland aho, mandra-pahoviana izy no niasa ho an'ny Ubuntu ho tonga ary tsy misy na inona na inona mandalo ny tananao amin'ny MIR, izay hanomboka aoriana kely ary hamita aloha. ary ny rehetra ho tsy vonona rehefa mila azy ireo ny Ubuntu.
Nahazo sandrin'ny MPAMORA aza izy ireo, be zotom-po ary tsy mitovy fiaraha-miasa fa tsy ny fiaraha-miasa - ny votoatin'ny SL, mifaninana ary miara-miasa - izy ireo kosa no nibolisatra sy nanosika azy fa tsy avelany ho hitany raha marina izy na raha ireo no Diso izy ireo ary nanitsy raha mety fa hendry, na manamafy ny hevitr'izy ireo na hoe tsara kokoa amin'ny zavatra sasany izy ireo ary ratsy kokoa amin'ny hafa, ampidiro ho toy ny safidy ny tsy fitovian'ny forker, fa kosa ny hita dia tsy tokony ho hendry loatra satria ny gadona izay mitondra mihoatra ny mpitondra
Ny wayland demo dia nandroso kokoa roa taona lasa izay, ny olana dia mipoitra amin'ny fomba fijery fa efa natomboka ny asan'ny kde sy ny gnome shell, ka hisy ny tapaka eo amin'ny tontolon'ny linux, eo anelanelan'ny tambajotra. satroka sy ireo disko hafa rehetra, ary ny ubuntu sy ny derivatives azy, andao hojerentsika ny niafarany, fa amin'ny farany dia mieritreritra aho fa hiafara amin'ny fanomezana satroka mena ny fifandanjana, misalasala aho fa hamela ireo mpampiasa matihanina ho tapaka i nvidia.
mutter dia tsy manana olana amin'ny ati, ati dia manana olana amin'ny mutter izay tsy mitovy, ny zava-mitranga dia ny tabataba dia nampiharihary ny fahantran'ny ati ao amin'ny linux, noho ny fanaintainan'ny mpankafy amd rehetra.
Mhh, tsy haiko, nifindra avy tany osx nankany linux aho, tamin'ny alàlan'ny akorandriaka ihany, satria rehefa nampiasa kde aho, tamin'ny farany dia niverina tany osx tamin'ny eyecandy foana aho, noho izany.
Mandray andraikitra ve i Ubuntu? Tsy fantatro. Raha ny marina dia tsy misy mahalala. Fa eny, ny ankamaroan'ny namako izay natomboka tao Ubuntu dia natahotra. Tsy noho ny firaisan-kina fa noho ny fahatsiarovany fahatsiarovan-tena sy ny fanjifan'ny processeur azy. Farafaharatsiny hitako ny Ubuntu mihaosa ao anatin'ny ekosistema GNU / LINUX, zavatra hafa no any ivelany. Ho hitantsika.
Rehefa nanandrana ny Ubuntu mahazatra aho dia natahotra ny fitantanana fonosana tsy misy fangarony, miampy ny fahatsapako fa niditra tao amin'ny CPU-ko ny voalavo ary tonga avy amin'ny kinova kely an'ny Lenovo Thinkpad ary nijery sary vetaveta amin'ny fandaniana PC . Noho izany antony izany dia tsy nijanona ny fampiasana Debian Stable aho satria tena fahagagana ny rafitra fiasa ary faly aho tamin'ity distro ity, ary ampirisihina aho hanandrana Slackware, CentOS ary / na Arch.
PS: Miteraka filàna ny fahafinaretana.
Rehefa nanandrana ny KDE 4.8 tao amin'ny Debian Oldstable aho dia tena faly tamin'ny fampiasa azy ary koa ny famolavolana ny Oxygen. Tsy haiko ny nanovan'ny KDE be loatra taorian'ny taona maro izay tsy nampiasako azy.
Salama, efa ela ve ianao no nanao debian? Nanomboka fitsapana debian aho herintaona sy tapany lasa izay + na - rehefa avy nanandrana distro hafa aho dia efa "wheezy" marin-toerana izao fa tsy haiko na hijanona eto na handeha hanao fitiliana hankafizan'ny kde 4.10. Inona no atolotry ny debianita za-draharaha amiko?
Tsy maintsy miala amin'ny paradigma windows 95 ianao, tapitra ny fotoanao ary mila maka ny baomba ianao amin'ny olon-kafa. Ny shell Gnome no naka azy ary manomboka io paradigma vaovao momba ny computing io.
Tsy maintsy ekeko fa tsara ny GNOME Shell (misaotra an'i Debian Wheezy fa mampiasa ny iray amin'ireo kinova farany tsara indrindra amin'ny GNOME 3), saingy indrisy, ny fandikana azy farany dia hadisoana domino.
Raha ny OpenBox sy / na FluxBox, izy ireo dia interface izay tsy dia hametraka ny Linux From Scratch / Arch raha hampiasaina amin'ny mpizara izany, ankoatr'izay ny XFCE dia afaka manao azy hitovy amin'ny GNOME Shell miaraka amin'ny plugins sy Compiz.
Rehefa avy namaky ity lahatsoratra ity aho dia nilaza anakampo hoe: hey you the Debian DVD .. Ary hoy aho anakampo, maninona raha andramana ny farany an'i Debian miaraka amin'ny script Gnome 3 default. Taorian'ny loza marobe niaraka tamin'i Gnome 3 taloha dia tsy maintsy ekeko fa nanao asa tsy mety tamin'i Debezy i Debian. Mihazakazaka tsy misy hadisoana i Gnome, tsy misy ifandraisany amin'ilay Gnome izay notsapaiko tao amin'ny Fedora 17/18 na Ubuntu Gnome. Haingam-pandeha izy io, marin-toerana ary indrindra tsy misy hadisoana :). Mahafinaritra ny miasa miaraka aminy ao amin'ny Debian Wheezy. Teo aloha dia nankany XFCE aho aloha, avy eo tany amin'ny KDE izay nijanonako nandritra ny enim-bolana teo ho eo. Miverina any amin'ny Gnome amin'ny Debian Wheezy (fametrahana madio) aho izao satria nifindra tany Gnome foana aho (nanomboka tamin'ity Linux ity aho) ary niaraka tamin'i Wheezy tianao indray ity script ity.
Mikasika an'i Debian Wheezy ihany, hijanona ao amin'ny toeran'ny fieren-ko maharitra roa taona aho dia mihazona tsara miaraka amin'ireo fonosana tafiditra ao amin'ny repos ary misy hatrany ny fandefasana ireo fampiharana vao haingana .. Andao, tsy misy fampitahana azy amin'ny Squeeze izay nampiasana ny kinova fitsapana. mila.
Na izany na tsy izany, tsy manam-paharetana be aho amin'ny fahatongavan'i RHEL 7 / CentOS 7, izay tsy isalasalana fa miaraka amin'i Debian Wheezy no famoahana lehibe indrindra tamin'ny 2013 😀
Manararaotra izay nolazainao dia efa nanandrana an'i Wheezy aho ary ny fametrahana azy madio dia manome rafitra tena azo antoka sy azo itokisana na dia miaraka amin'i Gnome Shell aza, ovao fotsiny ny loharanom-baovao.ary, amboary ireo endritsoratra, lohahevitra ary sary masina ary ankafizo mandritra ny fotoana fohy. Tsy mila ilay mpamily tompony intsony aho mba hiasa tsara ny birao rehetra, na izany aza ... ny Gnome klasika dia tsy voakilatatra araka ny hitiavako azy ary antenaina, na ny Gnome aza dia liana ny hamela azy io voadinika tsara raha mbola velona kosa ny andiany aorian'ny andiany. tsy noraharahaina, izany no antony itahirizako ny birao tokana ho an'ny solosaina rehetra izay intuitive sy mora ho an'ny rehetra, dia tsy hampiasa Gnome Shell aho ary hijanona miaraka amin'i Mate, satria azoko atao amin'ny Pentium IV sy i7 ny ... Hijanona ao amin'ny Squeeze mandritra ny andro vitsivitsy aho satria tena salama tsara.
Nikasa izany tamin'ny herinandro ambony aho, saingy efa tapitra talohan'ny faran'ny 24 ora.
J03x dia hoy izy:
Salama, tiako foana ny gnome saingy tsy dia manana firy izy io, apetraho ny debian 7, tsara daholo ny zava-drehetra mandra-pivaingana ny efijery ary mila manao reisub aho: Eny, mieritreritra aho fa raharaha ao amin'ny solo-sainako io, fa raha sanatria, fanavaozana ny fanandramana, na dia tsy hitako loatra aza. ovay ka nisafidy ny hametraka kanelina aho manantena aho fa havaozin'izy ireo amin'ny kinova 3.6 tsy ho ela izany ary andramo indray 🙂
Valiny amin'ny J03x
tsara indraindray, na amin'ny gnome na amin'ny firaisan-kina, tsy maintsy manao alt + f2 r xD isika, na dia amin'izao aza ao amin'ny 3.8 dia mbola tsy nitranga tamiko mihitsy izany.
Mahamenatra fa tsy azo alamina toy ny kde… 🙁 fa hey. Tsy maintsy zatra izany aho.
Ary maninona raha ampifanaraho amin'ny sitrakao ny KDE SC?
Ny iray amin'ireo tombony azo amin'ny fihoaram-pefy lehibe an'ny KDE dia ny fahafahanao manao izay tianao amin'ny birao.
Mazava ho azy, tsy ho fanandramana GNOME "marina" velively izany, fa manome toky anao aho fa tsy mamela na inona na inona irina izy io, raha ny marina dia ampirisihina aho hilaza fa ambony izany.
Tiako be koa ny GNOME Shell (hatrizay, na dia nanakiana mafy azy aza ny mpitsikera gidry) sy ny fampiasana ankapobeny izay ananan'ireo fampiharana GNOME, na dia tsy manova ny herin'ny tontolon'ny KDE SC sy ny fampiharana azy aza aho, araka ny nolazaiko androany, ny fahafaha-mamindra .
Araka ny efa nolazaiko dia azonao atao ny manao KDE amin'izay tianao:
Efa nolazaiko teo ihany, tsy maintsy nanapa-kevitra aho teo anelanelan'ny Debian na ny Fedora hapetraka, ary nisafidy an'i Debian aho. Tamin'ny andro niarahako taminy dia tiako izany, ankoatry ny interface, mora be ny manamboatra ary raha misy zavatra tsy ampy dia miara-miasa amin'i Google aho. Faly aho miverina amin'ny dingana "Linuxera", tsy nametraka rafitra GNU / Linux nandritra ny taona maro (manodidina ny 5, ary ny farany dia ny Ubuntu Ibix). Amin'izao fotoana izao dia miaina miaraka amin'i Manjaro Linux ny solosainako ary i Debian 7 no mipetraka ny solosaiko birao ary indrisy miaraka amin'i Winbugs (amin'izao fotoana izao).
Salama manana olana maro aho rehefa mametraka fitsapana debian 7 dia nanandrana tamim-pahamendrehana aho ary mitovy amiko ny mahazo ahy, noho izany manazava aho ..
Mandeha tsara ny fametrahana mandra-pahatonga azy tsy mahomby amin'ny fametrahana apt, rehefa mametraka azy fotsiny aho dia tsy maintsy ampiasain'ny rafitra, avy eo mitohy ary tsy mandeha indray rehefa mametraka grub, noho io ataoko io dia miditra amin'ny mpandika baiko aho ary manoratra ity:
Tsy nahafa-po ny andalana novakiako tao amin'ny sofina dia tahiriko sy akatako dia apetrako indray ny grub ary apetrako, amin'ny faran'ny fametrahana dia esoriny ny kapila ary mbola tratra hatrany amin'ny 83 ary koa in-10 nanandrana aho
Andao hojerentsika raha misy afaka milaza amiko izay tsy mety
Tsy manana Internet aho
Tsy preinces izahay, raha tsy manome fampahalalana bebe kokoa momba ny pc anananao ianao dia sarotra kokoa ny manampy, mbola misy ihany ny tsy fitoviana amin'ny fitaovan'ny masinina.
Azonao atao ny misintona ny netinstall ary manao fametrahana kely indrindra ny rafitra, manatanteraka fametrahana fototra tena izy an'ny rafitra, ny kernel ary zavatra vitsivitsy hafa, avy eo tsy maintsy apetrakao ny ambiny, feo, mpamily sary ary tontolo iainana sary (kde, gnome ,…) Ary tokony hamorona ny mpampiasa anao avy amin'ny console ianao avy eo hiditra amin'ny interface graphique.
Miezaha hanao ny fametrahana amin'ny fomba toy izao mba hahitanao ny fandehany sy ny toerana tsy ahombiazany satria amin'ny fomba fametrahana ny zava-drehetra amin'ny ampahany ianao dia azonao atao ny manandrana ny jessie netinstall (fitsapana) farany indrindra na iray amin'ireo wheezy (stable).
Ny fametrahana an'ity fomba ity dia tsy sarotra fa tsy maintsy ataonao amin'ny fomba tanana ny dingana ka mitadiava pejy maromaro manazava ny fizotrany ary mahatonga anao ho karazana mpitari-dalana. Azonao atao ihany koa ny mizaha toetra ny dingana rehetra amin'ny milina virtoaly aloha.
Misaotra betsaka anao tokoa, azafady fa tsy hitanao voafaritra amin'ny farany ary nisafidy ny fametrahana netinety ny fanandramana ary niasa tanteraka ny zava-drehetra, nijery tamin'ny alàlan'ny Google ary nametraka ny wifi aho, azoko alaina ao amin'ny efitranoko ny pc rehetra izay nataoko. ny efitrano misy ny router ahy izao hanohy hanakorontana ao amin'ny efitranoko, misaotra ny zavatra rehetra
Noho ny te hahafanta-javatra fotsiny dia avelako ho anao ny toetran'ny ekipako
AMD athon 64 3200+ processeur 2ghz
Ary ny graf dia 128 mb nvidia
Nanapa-kevitra aho taorian'ny namaky be ny fitsapana ny xfce
Safidy mety ve izany?
Sa miaraka amin'ireo endri-javatra ireo no tokony hametrahako debian lxde?
ok faly aho fa niasa ho anao izy io. XFCE Heveriko fa safidy tsara io.
Misaotra betsaka fa hanohy hamaky hianatra aho, holazaiko anao
ilaina dia hoy izy:
Vao haingana aho no nanapa-kevitra ny hametraka ny distro voalohany. Te hanandrana an'i Debian aho, saingy noho ny tolo-kevitry ny antoko fahatelo dia lasa nametraka ny LMDE tamin'ny MATE aho. Tiako izany ary rehefa afaka herinandro no nampiasako azy dia nesoriko mba hijanonako amin'ny renin'ny fizarana ankehitriny sy ho avy be dia be.
Ekeko fa tena mahery setra ny fifandraisana voalohany tamin'i Gnome Shell. Tsy nisy na inona na inona tokony hisy ... raha ny marina. Na izany aza dia nanandrana aho ary tamin'ny farany, aorian'ny roa na telo andro nampiasako azy dia mila milaza aho fa tontolon'ny birao tena tiako io. Tsotra araka izay azo atao, ary amin'ny zavatra rehetra eo an-tànana. Tena tsy malahelo ny birao nentim-paharazana aho. Ny tena marina dia satria tsy nanome olona GNOME 10 aho dia homeko 9 izy ireo. Mba hanandrana kely kokoa izy ireo (tsy fantatro izay, fa hisy zavatra hitranga amin'izy ireo) ary tsy hijanona hatory foana izy ireo.